Qaxxaamuroota (Gaheenya LibreOffice)
Meeshaa hantuutee osoo hin fayyadamiin, gabatee furtuu qofa fayyadamuun LibreOffice to'achuun ni danda'ama.
Fuula gargaarsaa guddaa tokkoo tokkoo moojuulii irratti (fakkeenyaaf, barreessaa LibreOffice yookiin fuula gargaarsaa guddaa Calc LibreOffice) moojuulii sanaaf gargaarsa qaxxaamuraa kan gabatee furtuu gahinsa gochuuf geessituun ni jira.
Dabalataan, "Gaheenya" gabatee furtuu jalatti ajajaalee ejjattoo-ejjattoodhaan waa'ee meeshaa hantuutee malee akkamitti moojuulii filatamee to'achuun akka danda'amu argatta.
Hantuutee malee walquunnama fayyadamaa LibreOffice tiin hojjechuu.
Kabala baafataa, kamshaawwan, foddaawwan, fi galmee dandeessisuu.
Karaa wantoota armaan gadii jijijjiirtota F6 xiyyeefannoo fi geengoolii irradeddeebiitiin dhiibuu:
kamshaalee hunda gubbaa gara jalaatti fi bitaarraa gara mirgaatti,
foddaa bilisa mara bitaarraa gara mirgaatti,
Gara galmeetti jijjiiruuf,AjajaCtrl+F6 dhiibi.
Gara kabala baafataa fi duubatti deebi'uuf F10 dhiibi.
Escapen, baafata xiqqaa baname, kamshaa, ykn foddaa bilisa ammaa cufa.
Ajaja baafataa tokko waamuu
Baafata jalqabaa filachuuf DirqalaAlt yookan F6 ykn F10 dhiibi (baafata Faayilii). Xiyya mirgaan, baafatni itti aanu kan mirgaa ni filama; xiyya bitaan, baafatni durii ni filama.
Xiyyi gadee baafata filame bana. Xiyyi dabalataa gadee fi olee, filannoo ajajoota baafataa keessatti siqsa. Xiyya mirgaatiin ammoo, baafatoota xiqqaa jiran mara banuu ni dandeessa.
Ajaja baafataa filame raawwachuuf Enter dhiibi.
Ajaja sajoo tokkoo raawwachuu
Hanga sajoon jalqabaa kamshaa irra jiru filamutti F6 irra deddeebi'ii dhiibi. Kamshaa surdalaa irratti sajoo filachuuf xiyya mirgaa fi bitaa fayyadami. Haaluma walfakkaatuun, kamshaa sarjaa irrati sajoo filachuuf xiyya olee fi gadee fayyadami. Furtuun Home, kamshaa tokko irraa sajoo jalqabaa, furtuun End ammoo kamshaa isa dhumaa filu.
Sajoo filame raawwachuuf Enter dhiibi. Yoo sajoon filataman haala baratamoon gocha hantuutee irraa duuban barbaadu ta'ee, kan akka reektaangilii galchuu, san booda furtuu Enter qofa dhiibuun ga'aa miti: iddoo kanatti AjajaCtrl+Enter dhiibi.
Wanta fakkasaa uumuuf sajoo AjajaCtrl+Enter irratti cuqaasuu. Wanti fakkaasaan gidduu mul'annootti hammamtaa dura ibsame waliin bakka qabata.
Galmee keessaa wanta fakkaasaa jalqabaa filachuuf, meeshaa filannoo irraa AjajaCtrl+Enter dhiibi. Yoo wanta fakkaasaa filaman gulaaluu, hammamteessuu, ykn siqsuu barbaadde, xiyyeefannoo galmee keessatti sirreessuuf jalqaba CAjajaCtrl+F6 fayyadami.
Yoo kamshaan argii irratti mul'achuu kan danda'u caala ta'e, sajoo gara handaara mirgaa ykn jalaatti agarsiisa. Sajoo hafan agrsiisuuf kamsha filachuun PageUp ykn PageDown dhiibi.
Kamshaaleef qabachiisa addayaa
Kamshaa filame banuuf xiyya gadee fi mirgaa dhiibi. Innis cuqaasa hantuutee waliin waltiqixa. Kamshaa keessatti furtuuwwan xiyya mirgaa fi bitaa fayyadami. Furtuuwwan Home fi End kamshaa keessaa sajoo jalqabaa fi dhumaa walduraa duubaan filu.
Esc dhaan kamshaa cufi. Hantuuteen alatti kamshaa siqsuun hin danda'amu.
Saanduqa makaa tokko irraa filannoo
Saanduqa makaa fili. Enter dhiibi.
Galfattoota saanduqa makaa gadee maruuf, xiyya gadee ykn furtuu Page Down, ykn olee maruuf ammoo xiyya olee ykn furtuu Page Up fayyadami. Furtuun Home gara galfata jalqabaatti fi furtuun End gara galfata dhumaatti si geessu.
Galfata filame raawwachuuf Enter dhiibi.
Filannoo Gabateewwan keessaa
Foddaawwan, Qaaqawwanii, fi dirree to'annoo gabatee hedduu keessaa, deetaa filachuuf gabateewwan ni jiru, fakkeenyaaf, gara mirgaa Mul'annoo Madda Deetaa keessatti. Furtuuwwan armaan gadii gabatee kanneen keessaa filachuuf fayyadu:
Kabala iddoo: tarree ammeef filannoo jijjiiruu fi filannoo hunda dhiisa, garuu yoo maadheen ammaa haalata gulaalli keessa jiraate hin ta'u.
AjajaCtrl+Kabala iddoo: filannoo tarree ammee fi dhiisuu filannoo kana jijjiira.
AjajaCtrl+Shift+Kabala iddoo: filannoo tarjaa ammaa
OptionAlt+Xiyya Olee yookan DirqalaAlt+Xiyyaa Gadee gargareessaa gabatee fi unka gidduu siqsa, fakkeenyaaf barroo tarroo kuusdeetaa keessaa.
To'annoo gabatee yookiin mul'annoo madda deetaa keessatti, furtuun Tab tarjaa itti aanutti siqsa. To'annoo itti aanuu siqsuuf, AjajaCtrl+Tab dhiibuu dandeessa. Too'annoo duraa siqsuuf, Shift+AjajaCtrl+Tab dhiibi.
Hammamtaa fi qubannoo Foddaawwanii fi Qaaqawwanii
Jalqaba DirqaleeAlt+spacebar dhiibi.
Sirni baafataa ajajoota kan akka Siqsi, Hagamtaa Jijjiiri fi Cufi ni bana.
Ajaja (xiyya gadee, itti aansee Enter) filadhu.
Qaaqaa ykn foddaa, siqsuuf ykn hagamtaa jijjiiruuf amma furtuuwwan xiyyaa fayyadamuu dandeessa.
Jijjiirama fudhachuuf Enter dhiibi. Jijjiirama dhiisuuf Escape dhiibi.
Foddaalee fi Kamshaalee Hidhuu fi Kaafachuu
Hanga foddaan ykn kamshaan filamutti F6 dhiibi.
Wanti OLE filame kan kaka'u furtuu Galchi jedhuuni.
Qubannoo fi Hammamtaa wantootaa gulaali
Safartuu tarsaa qulqullinaa tokkoon wantoota filaman siqsuuf, furtuulee xiyyaatti fayyadami.
Wanta filatame piikseelii tokkoon siksuuf OptionAlt fi furtoota xiyyaa fayyadami.
Qabannoo haalataa gulaali galchuuf, CommandCtrl+Tab fayyadami. Qabannoon bitaa innii gara gubbaa qabannoo si'aadha, liphsachuu eegala. Qabannoo itti aanuu filachuuf, AjajaCtrl+Tab fayyadami. Qabannoo haalataa gulaaluu keessaa bahuuf, Escape fayyadami.
Qabannoo haalataa gulaali keessatti, furtootni xiyyaa qabannoo filataman isa hamamtaa wantichaa jijjiiru siksa.
Korkoddiiwwan Wantaa Gulaali
Korkoddii kan wanta tokko furtoota xiyyaa waliin siqsuu nidandeessa. Jalqaba qabannoo haalataa gulaali galchitii, korkoddii filadhu. Akaakuu korkoddii irratti hundaa'uun, korkoddiicha gara adda addaatti siqsuu nidandeessa.
Qabannoo haalataa gulaali, AjajaCtrl+Tab waliin galchi.
Qabannoon bitaa innii gara gubbaa liphfachuu eegala. Yeroo hedduudhaaf AjajaCtrl+Tab dhiibi, hanga qanannoon humtuu hin liphfannetti. Asattoo kun ammaa korkoddiin wantichaa akka ka'aa ta'e agarsiissa. kalatiidhaan korkoddii kakaasuuf, galmeewwan barruu keessaa, Shift+CommandCtrl+A dhiibuu nidandeessa.
Korkoddiicha siqsuuf furtoota xiyyaa fayyadami. Wantaan akka barbaachisumaasaatiitti korkoddiicha dukaa bu'a.
Korkoddii wanta filatamee, fakkeenyaaf baafata halqaraa wantoota keessatti jijjiiruu nidandeessa.
Yoo wantichii Gara Keewwatatti korkoddaa'ee, furtuun xiyyichaa, wanticha gara keewwata duraaniitti ykn gara keewwata itti aanuutti siqsa.
Yoo wantichii Gara Fuulaatti korkoddaa'ee, Furtooti PageUp yk PageDowniin gara duraaniitti ykn gara itti aanuutti siqsa.
Yoo wantichii Gara Arfiitti korkoddaa'ee, furtootni Xiyyaa, keewwata ammee keessa siqsu.
Yoo wantichii Akka Arfiitti korkoddaa'ee, sajoon korkoddii kamiyuu hinargamu. Wanticha siqsuu hindandeessu.
Yoo wantichii Gara Goodayyaatti korkoddaa'ee, furtootni Xiyyaa, qixa irraa duubaatiin goodayyaa itti aanuutti siqsa.
Hirtuu Sararootaa Too'aachuu
Mul`atoota gargarreesamaa keessaatti galmeewwan Calc LibreOffice, Fakkasaa LibreOffice,fi Toleessaa LibreOffice sardalanii fi tarjaan addabaasuu dandeessa. Tokko tokkoon mul`ata gosa galmeewwan biraa agarsiisu. Hantuutee gargaaramuudhaan, sarara hiraman kabala maraa irraa gara galmeetti harkisuu dandeessa.
Shift+AjajaCtrl+F6:: hirtuu sararoota bakka qubannoo durtii fi xiyyeeffannoo sarara tokkoo mul'isa.
Furtoota xiyyaa: hirtuu sarara ammee qixa xiyyaa keessaa ejjatoo guddaan siqsa.
Shift+Furtoota xiyyaa: hirtuu sarara ammee qixa xiyyaa keessaa ejjatoo xiqaan siqsa.
Delete: hirtuu sarara ammee haqa
Shift+Delete: hirtuu sararawwani lachan haqa
Enter: qubannoo ammee hirtuu sararawwani supha
Escape: hirtuu sarara ammee gara qubannoo durtiisaatiitti haaromsa
Mul'annoo Madda Deetaa Too'aachuu
F6: galmee fi kamshaa gidduutti jijjiira.
+ (furtuu idaatii): aloolaa madda deetichaa keessatti galfata filataman baldhisa.
- (furtuu hir'inaa): aloolaa madda deetichaa keessatti galfata filataman qoncoorsa.
AjajaCtrl+Shift+E: aloolaa madda deetaa fi gabatee gidduutti jijjiira.
Qaxxaamurawwan Foddaa Saxaxa Gaafataa keessaa
F6: kabala wantaa, mul'annoo gabatee, fi iddoo filannoo gidduutti jijjiira.
FilannoAlt+Xiyya olii ykn FilannooAlt+xiyya gadii: daangaa mul'annoo gabatee fi naannoo filannoo olii fi gad siksa.
Furtoota Mul'annoo Gabatee keessaa (bal'ina gubbaa saxaxa gaafataa)fi foddaa Quunnamtiiwwanii keessaa
AjajaCtrl+Furtuu xiyyaa: gabatee filatame gara kallattii xiyyaatti siqsa.
CommandCtrl+Shift+Furtuu xiyyaa: gabateen filatame mul'annoo gabatee keessatti hammamtaa jijjiira.
Del: Mul'annoo gabatee irraa, gabatee fi walindhaa filataman haqa.
Tab: gabateewwanii fi walindhaa, mul'annoo gabatee keessaa gidduutti jijjiira.
Enter: yammuu walindhaan filatamuu, furtuun Enter qaaqa Amaloota kan walindhaa bana.
Enter: yammuu gabateen tokko filatamu, furtuun Enter dirre deetaa jalqabaa saanduqa tarree irraa iddoo filannoo keessatti galcha.
Furtuuwwan naannoo filannoo (gara jalaa saxaxa gaafataa)
AjajaCtrl+xiyya Bitaa ykn Xiyya Mirgaa: tarjaa filatame gara bitaa ykn gara mirgaatti siqsa.
Furtuuwwan Foddaa Saxaxa Gabatee keessaa
F6: kamshaa, mul'annoo tarjaa, fi naannoo amaloota gidduutti jijjiira.
Gulaaltuu ImageMap too'achuu
Sajoo tokko filachuuf Tabii dhiibi. Yoo sajoowwan keessaa Rectangle irraa gara Rogdanee Unkabilisaa tokko filattee, CommandCtrl+Enter dhiibdee, hammaamtaa durtiitiin wantii kan akaakuu filatameen uumama.
Osoo sajoon Fili filatamee jiruu yoo Galchii dhiibdee, xiyyeeffannoon gara foddaa calaqqee kan Gulaalaa ImageMap itti qindaa'a. Xiyyeeffannoon gara sajoowwanii fi saanduqoota naqaa duraaniitti qindeessuuf Esc dhiibi.
Yoo sajoon Fili filatamee jiruu yoo Ctrl+Enter dhiibdee, wanta jalqabaa foddaa calaqqee keessaa nifilama.
Sajoo Tuqaalee Gulaali fayyadami rogdaneewwanii fi dugdaf haalataa gulaalii tuqaa keessatti jijjiiruuf.
Tuqaa itti aanuu filachuuf, foddaa calaqqee keessatti Ctrl+Tab fayyadami. Tuqaa duraanii filachuuf Shift+Ctrl+Tab fayyadami.
Wanta filatame haquuf furtuu Delete wajjin xiyyeeffannoo kan fodda calaqqee keessatti argamu fayyadami.
Sajoo ykn to'annaa, ajaja filatameen ammaatiif Qacceewwan Baay'ate mul'isuuf Shift+F1 dhiibi.
Fuulota gargaarsa duraasaa naanna'uu
Fuulota gargaarsa duraasaa keessatti, gaggeessituu itti aanutti utaaluuf Tab ykn gaggeessituu darbetti utaaluuf Shift+Tab fayyadami.
Geessituu filatame raawwachuuf Enter hanyaquu.
Fuula gargaarsa darbeetti deebisuuf Backspace furtuu Enter olii hanyaqi.
Too'annaa qaaqa alaaguu barruu (alaaguu faayelii CSV )
Xiyya Bitaa ykn Mirgaa: qubannoo tokko gara bitaatti ykn mirgatti deemi
Xiyya Ctrl+Left ykn Xiyya Ctrl+Right: kan darbetti ykn addabaa itti aanuutti utaali
Xiyya Ctrl+Shift+Left ykn Xiyya Ctrl+Shift+Right: addabaa qubannoo tokko gara bitaatti ykn mirgaatti siksi
Home ykn End: qubannoo jalqabaa ykn dhumaa danda'amutti utaali
Ctrl+Home ykn Ctrl+End: addabaa jalqabaa ykn dhumaatti utaali
Shift+Ctrl+Home ykn Shift+Ctrl+End: addabaa gara qubannoo jalqabaa ykn bitaatti siksi
Furtuu iddoo: addabaa saagi ykn haqi
Furtuu Insert: addabaa saagi (addabaa'oota hin jjiiramne jiran dhiisi)
Furtuu Delete: addabaa haqi
Shift+Delete: addabaa'oota hundaa haqi
Xiyya olii ykn Xiyya gadii: gabatee tarree tokko gadi ykn ol mari
Page Up ykn Page Down: gabatee fuula tokko gadi ykn ol mari
Furtuu Escape (yeroo harkisa hantuuttee): harkisuu dhiisi, addabaa gara qubannoo duritti siksi
Xiyya Bitaa ykn xiyya Mirgaa: tarjaa bitaa ykn mirgaa filitii filannoo biraa haqi
Xiyya Ctrl+Left ykn Xiyya Ctrl+Right: waltajjii gara tarjaa bitaa ykn mirgaatti siksi(filannoo hin jijjiirin)
Xiyya Shift+Left ykn Xiyya Shift+Right: hangii filatame baldhisi ykn suntuursi
Xiyya Ctrl+Shift+Left ykn Xiyya Ctrl+Shift+Right: hangii filatame baldhisi ykn suntuursi. (filannoowwan biroo hin jijjiirin)
Home ykn End: tarjaa jalqabaa ykn kan dhumaa filadhu(Shift ykn Ctrl akka furtuuwwan qareetti fayyadami)
Shift+furtuu iddoo: hangi tarjaa dhuma filatamee hanga tarjaa ammaatti fili
Ctrl+Shift+furtuu iddoo: hangii tarjaa dhuma filatamee hanga tarjaa ammaatti fili(filannoowwan biroo hin jijjiirin)
Ctrl+A: tarjoota hunda fili
Shift+F10: baafata halqaraa bani
Ctrl+1 ... Ctrl+7: akaakuu tarjaa 1ffaa ... 7ffaa tarjaawwan filatamaniif qindeessi
Ctrl+Home ykn Ctrl+End: gara gabatee gubbaa ykn jalaatti mari
Too'annaa Insert - qaaqa arfii addayaa
Tabiin too'annaawwan hundaa qaaqaa keessatti geeddarama.
OptionAlt+Xiyya Gadii saanduqa makaa bana. Enteriin galfata ammaa saanduqa makaa keessaa fila.
Qabduun xiyyaa naannoo filannoo guddaa keessa siqa. Spacebariin arfii ammee tarree arfoota saagamanii ida'a.
Title is: Qaxxaamuroota (Gaheenya %PRODUCTNAME)